ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro | Androidsis
ဒီ terminal ကိုအချိန်အတော်ကြာပြန်လည်သုံးသပ်ချင်တယ်။ ငါလွန်ခဲ့သောအချိန်အတန်ကြာသီးသန့်အဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်နှင့်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ် Doogee Valencia2Y 100 Pro ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တယ်, ဒါမှမဟုတ်အတူတူပဲဘာလဲ, တရုတ်မူရင်းကုမ္ပဏီနိမ့်ဆုံးကို Android ၏ခက်ခဲတဲ့စစ်တိုက်အနိုင်ရအလောင်းအစားထားတဲ့အတွက် terminal ကို။
ဤသည်၌ Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနိဒါန်းအဆင့်သို့မဟုတ်နိမ့်နိူင်သည့် Android တွင်နည်းပညာထည့်သွင်းမှုများနှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမှအမြင့်ဆုံး Android အကွာအဝေးတွင်ထည့်သွင်းထားသောအပြီးသတ် Android တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုရွေးချယ်ပါကဤစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Android terminal သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသင်ပြပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ယူရို ၁၀၀ ကျော်လောက်အတွက်ဒါက terminal တစ်ခုပါ ၂၃.၉၉ ယူရိုငွေဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးတွင်ပူးတွဲပါသောဗီဒီယိုတွင်သင်ပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1 Doogee Valencia2Y 100 Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 ဒီ Doogee Valencia2Y 100 Pro ရဲ့အကောင်းဆုံး
3 ဒီ Doogee Valencia2Y 100 Pro ၏အဆိုးဆုံး
Doogee Valencia2Y 100 Pro ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Valencia2နှင့် 100 Pro ကို
operating system အန်းဒရွိုက် 5.1 Lollipop
ဖန်သားပြင် ၂.၅ D နည်းပညာ HD resolution ဖြင့် ၅ လက်မ IPS OGS5x 2.5 pixels 1280 dpi နှင့် Corning Gorilla Glass ကာကွယ်မှု
Processor ကို Mediatek MT6735P Quad Core နှင့် 64 Bit 1 Ghz နည်းပညာ
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 GB သည် partition မပါဘဲ၊ 128 SD Gb အထိ Micro SD အထောက်အပံ့ဖြင့်ပါ
နောက်ကင်မရာ FlashLED ပါသော 13 Mpx ပါဝင်သည်
ဆက်သွယ်မှု Dual SIM - 2G - 3G - 4G - Bluetooth 4.0 - Wifi - GPS - aGPS - FM ရေဒီယို
သည်အခြား features တွေ စမတ်နှိုးခြင်း - အမူအယာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
ရှုထောင့် 142'6 x 72'1 x 9'35 မီလီမီတာ
စြေး 106 ယူရို
ဒီ Doogee Valencia2Y 100 Pro ရဲ့အကောင်းဆုံး
သင်၏ Doogee Valencia2Y 100 Pro ၏အကောင်းဆုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် လက်လီစျေးနှုန်းအလွန်အမင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းသည်၎င်းကို၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းကိုတွေ့နိုင်သည် အရည်အသွေးမြင့် display Android terminal များနှင့်ငြူစူရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသည့်အပြင်၎င်းထက်စျေးကြီးသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်အားသာချက်တစ်ခုမှာယူရို ၁၀၀ အောက်သာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Quad Core terminal တစ်ခုလုံးရနိုင်သည်၊ quad core နှင့် RAM2GB အမှန်တရားကသူတို့ဟာဒီဟာကိုအရမ်းတော်တယ်လို့ခံစားရတယ် Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro.
Doogee terminal အသစ်၏အားကောင်းသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သောနိမ့်ကျသောသို့မဟုတ်ပျမ်းမျှအားဖြင့် Android တွင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုခြင်းကအတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ရှိခြင်းသည်အခန်းကန့်များမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုရရှိစေပါသည်။ ငါတို့လိုချင်တဲ့ applications အားလုံးကို install လုပ်ဖို့နေရာလုံလောက်ပြီနှင့်ပိုပြီး၎င်း၏ထောက်ခံမှုစဉ်းစား Micro SD ကဒ်ကို 128 Gb အထိတပ်ဆင်ထားသည် ထို့အပြင် Android 5.1 Lollipop ကဂိမ်းများကဲ့သို့သောအကြီးစား application များမှအချက်အလက်များကိုပြင်ပသိုလှောင်မှုကဒ်သို့ပြန်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသည်။
နောက်ဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရှုထောင့်နဲ့ကြည့်ရင်ရှေ့ကင်မရာရှေ့၊ နောက်ဖက်အပြင်ကင်မရာထဲကိုထည့်လို့ရသလိုအပြင်ဘက်မှာဖြစ်စေတောက်ပသောပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေ အံ့သြဖွယ်အသံ သူဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ Doogee Valencia2Y 100 Pro ၏နောက်ဘက်စပီကာ.
ဒီ Doogee Valencia2Y 100 Pro ၏အဆိုးဆုံး
အမှန်တရားမှာငါဟာ Doogee Valencia2Y 100 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာစကားအနည်းငယ်သာရှိသည် သာ 2.200 mAh နှင့်အတူအနည်းငယ်တင်းကျပ်စွာဘက်ထရီ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ HD ၌တည်မြဲနေသော resolution ရှိသည့် ၅ လက်မအရွယ် screen ပါ ၀ င်သော်လည်းခက်ခဲသောတစ်ရက်လုံးခံနိုင်ရည်ရှိရုံဖြင့်လုံးဝမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်၎င်း၏ကင်မရာများအားကောင်းမွန်သောရှုထောင့်များတွင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါကအဆိုးဆုံး Doogee Valencia2Y 100 Pro အပိုင်းတွင်လည်းထည့်သွင်းရမည်။ ညဉ့်အခါမှေးမှိန်အိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အိမ်ပြင် lit.
Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro
IPS OGS HD မျက်နှာပြင်
Quad Core ပရိုဆက်ဆာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro ။ Doogee ၏အနိမ့်ဆုံး Android အတွက်လျှို့ဝှက်လက်နက်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်၌ရှိသည်၊ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကမှရောက်ရှိလာခြင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းဘက်ထရီသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသေးငယ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်နေ့ကိုပေးရန်လုံလောက်သည်၊ ကင်မရာများသည် သိပ်မကောင်းပေမယ့်သူတို့ပါးစပ်ထဲကအရသာများစွာကိုချန်ထားခဲ့လို့သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ အသင်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်စေချင်ပါတယ်။
android 5.1 ကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော HD မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်ပြီးမြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသည့်အပြီးသတ်နှင့်ရယ်စရာကောင်းသောစျေးနှုန်းများပါရှိသည့် terminal တွင် Android 106 ကိုခံစားနိုင်ခြင်းသည်စစ်မှန်သောအတိတ်ဖြစ်သည်။ သာ XNUMX ယူရို။
Whola၊ ဘယ်မှာယူရို ၁၀၆ အတွက်လဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။ ငါမိုဘိုင်းကိုစတင်တဲ့အခါ, ငါကပြောပါတယ်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရ။ »အက်ပလီကေးရှင်း၏ခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲမှုပိတ်ထားသည်နှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည်လုံးဝသော့ခတ်ထားသည်။ ငါဘာတွေထိမိခဲ့တာလဲ ဖုန်းကိုထပ်မံအသုံးပြုနိုင်ရန်ဤပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
မင်္ဂလာပါဟိုဆေး - ချိန်ညှိချက်များ၊ အထွေထွေ၊ လုံခြုံရေး၊ App ခွင့်ပြုချက်များ။ သင်က activate လုပ်
သင်မပြုလုပ်နိုင်ပါက၊ မူလမျက်နှာပြင်မှဘယ်ဘက်ခလုတ်ကို / စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ / လုံခြုံရေးကိုထိပါ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီး၏ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်၎င်းကိုမလိုပါ။ ဒီညငါနင့်ကိုငါပြောခဲ့တာတွေအလုပ်မဖြစ်ဆိုတာသိချင်နေတယ် ငါသိပါရေစ။
အဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…မျက်နှာပြင်ကတုန့်ပြန်မှုမရှိပါဘူး၊ ဘယ်ဘက်ခလုတ်ကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ အဆိုပါသူကပြောတယ်ဖုန်းကိုငါ့ကို ဦး ခေါင်းကြာပါသည်။
ဒီမိုဘိုင်းမော်ဒယ်လ်နဲ့ကျွန်တော် ၆ လနေခဲ့ဖူးပါတယ် ငါဖုန်းကိုအများကြီးသုံးဖြုန်း။ ငါအရမ်းပျော်တယ် ၎င်းသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ငါဒီအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါက၎င်း၏စျေးနှုန်းအရည်အသွေးအချိုးအစားအတွက်အကြံပြုပါသည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်မှာ doogee Valencia Y100 ရှိပြီးအခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပေးပို့လိုပါကမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်းကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။
Marcelino lopez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ DOOGEE Valencia2Y100Pro ရှိ၍ 4G သင်္ကေတမပေါ်လာပါ။ Movistar ကကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ထားကြောင်း၊ သို့သော်ဖုန်းပေါ်တွင်မပေါ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားဤအကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြနိုင်ပါသလား။
အယ်လီနာမွန်တီရိုမီယို placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အပိုဘက်ထရီကိုပရိုဂရမ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်နိုင်ပါသလား။ ပေါင်းပေါင်း ၃၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်လိုလားသူနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
အယ်လီနာ Montes Romero အားစာပြန်ပါ
Alexis Martinez ၏အကြိုက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ
OK Google သည် WhatsApp၊ Viber နှင့်အခြားအရာများသို့မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်